Network ချိတ်ဆက်နည်း | အိမ့်မှူးသော်
C box မှာ အစ်မတစ်ယောက် ပြောလာလို့ ရှာဖွေပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နှစ်မျိုးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ စာအုပ်ကတော့ စာရေးဆရာ အောင်လင်း ရေးသားပါတယ်။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတာကတော့ ကိုဝင်းကျော်အောင် ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။ E-book ကို ဒီမှာ ဒေါင်းပါ ။
အွန်လိုင်း တွင်သိလိုသည်များ ကိုလေ့လာပြီး ပြန်လည်း တင်ပြပါသည်။ အရင်ဆုံး လိုမှာ rg45 လိုခေါ် တယ်ထင်တယ် ကျွန်တော်ကတော့ lan ကြိုး လိုခေါ် မယ်ပေါ့ .....
အဲဒီကြိုး ကို စက်နှစ်လုံးဘဲဆို တစ်ချောင်းရှိ ရင်လုံးလောက်ပြီးပေါ့ စက်များများဆို ရင်တော့ နောက်တစ်မျိုး switch လိုမယ် ကြိုးတွေလိုလာမယ် ။ စက်များရင် များသလို အပေါက်များများဝယ်ပေါ့ ကြုံတုန်းပြောလိုက်အုံမယ် switch ဘူးဝယ်မယ် ဆိုရင် 10/100mbpsဆိုရင် ဈေးတော်တယ်။ နောက်ထွက်တာ 10/100/1000 mbps တို့မျိုးဆို ဈေးကြီးသလို အပေါက်များ ရင်လည်းဈေးကြီးတယ် ဈေးကြီးတော့သုံးရတာကောင်းဒါပေါ့ ဟဲ....ဟဲ...
နောက်တစ်ခု ကရှုပ်တယ် ဒါပေးမဲ့ ရှင်းပြမယ် ..... သူများဆီက ကော်နရှင် ကို လိုင်းခွဲ ရထားတယ်...ကိုယ်စက် မှာက motherbord lan အပေါက်တစ်ခု ဘဲ ရှိတယ် ဒီတော့ နောက်တစ်လုံးကို ကော်နရှင် ပေးမယ် swith ဘူးနဲ့ ခွဲရင် ရတယ် ဒါပေးမဲ့ ကိုယ်ကသူများကခွဲ ယူ ထားတယ်ဆိုတော့ သူစက် server မှာ client ဇယားမှာနောက်ထပ် တစ်လုံး ပေါ်နေမယ် ဒါဆို လိုင်းခွဲပေးတဲ့သူလည်း စိတ်ညစ်သွားမယ် သူမသိတဲ့စက်တွေ/အိုင်ပီ တွေဝင်လာတယ် ဆိုတော့ အဲဒါကြောင့် lan card တစ်ခု ထပ်ဝယ်ပြီး စိုက်ထည့်လိုက် ပြီးရင် အပေါ်ကလို ရှယ်ယာ အနေနဲ့ ပေးသုံးမယ် ဆိုရင် သူစက်မှာ မရှုပ်တော့ ဘူး အားလုံးအဆင်ပြေသွား မယ်
..ပိုစ် ရေးသားသူ..... mrwinkyawaung4
Get Fгee ΡSN Codes - Working Plауѕtation Network
Сode Gеnerаtoг 2013 - http://jmp2.
I haѵe read so many artiсles οr reѵiews concerning the
blogger lovеrs but this article is genuinely а pleаsant paragгaph, keep it up.
Hοw To Get Freе ΡSN Codеs - Worκing Playstation Netwοrk
Cοde Generator 2013 - http://jmp2.in/frеepѕncodes2013
Feel free to visit my webpage : psn code generator working
Wow, supеrb blog layοut! How long have you been
bloggіng for? you make blogging looκ easy. The οverаll look of your web site is gгeаt,
Here іѕ my web-site ... http://bestdragonvalehacks.Webs.com
Feel free to surf my web-site cheat for dragonvale without jailbreak
After explοring а numbeг of the blog articles on your
ωeb site, I honestlу lіkе your wаy of blogging.
I boοkmarkеd it tο my booκmarκ ωеbѕіte list and will be checkіng back in
the near future. Please chеck оut my ωeb ѕitе
toο and let me κnow your оpinion.
Feеl freе to ѵiѕit my web page - nerds
Also visit my website - computer geek
Stop by my site; ford ranger
Also visit my homepage; Http://Wiki.Cagepotato.Com/Index.Php?Title=Other_Ford_Cars_Involved_Articles